I-WMO Yandisa Ukuqaphela Ezinsikeni Ngenxa Yokushintsha Kwesimo Sezulu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
I-WMO inyusa ukubonwa emapalini ngenxa yokuguquka kwesimo sezulu
Ukuguquka kwesimo sezulu kunemiphumela emibi kakhulu kumaqhwa eqhwa emhlabeni jikelele. Ukwanda kwamazinga okushisa embulunga yonke akhiqizwa ukukhishwa kwegesi ebamba ukushisa ezandleni zomuntu, kubangela ukuncibilika kwamakhekheba eqhwa amakhulu asemaphethelweni omhlaba emhlabeni.
Ukwehlisa imithelela yokuguquka kwesimo sezulu ezindaweni ezibandayo, iWorld Meteorological Organisation (WMO) yethule umkhankaso wokuthi thuthukisa ukubonwa nokubikezelwa kwemiphumela kumaqhwa eqhwa. Ngale ndlela, izingcuphe zemvelo zesikhathi esizayo zingancishiswa futhi nemisebenzi yezomnotho emapalini ingakhuthazwa.
1 Ukufundwa kobungozi bemvelo bezigxobo
2 Izinhloso zohlelo
3 Izindawo ezintsha
Ukufundwa kobungozi bemvelo bezigxobo
Inethiwekhi yososayensi ababalelwa ku-200 ihlose ukutadisha ngokucophelela ubungozi bezemvelo bokuguquguquka kwesimo sezulu emapalini eminyakeni emibili ezayo. Ngalokhu, inhloso ukuthuthukisa izinhlelo zokubikezela isimo sezulu kanye neqhwa lasolwandle nezimo ze-Antarctic. Lezi yizifunda ezingaziwa kakhulu emhlabeni, ngakho-ke kubaluleke kakhulu ukwazi ukuthi ukushintsha kwesimo sezulu nokushisa komhlaba kuthinta kanjani lezi zindawo.
I-ejensi yemozulu yeZizwe Ezihlangene izosungula izikhathi ezithile zokubheka ezigxotsheni ukuze kwandiswe ukuqapha kanye nokubheka imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu ezigxotsheni. I-Argentine Antarctic Institute kanye ne-Alfred Wegener Institute yaseJalimane, phakathi kwabanye ababambisene nabo abavela emhlabeni wonke, nabo bazobamba iqhaza kulokhu kubhekwa nokubhekwa.
Inhloso ukutadisha ubusika nehlobo lika-2018 eNyakatho Pole, kanti ngakolunye uhlangothi, abanye ochwepheshe bazofunda ubusika bango-2019 eSouth Pole. Ososayensi abangama-200 bazohlukana ukutadisha ngokujulile izingongolo ezimbili zomhlaba.
Izinhloso ezinkulu zalolu hlelo locwaningo ukwehlisa ubungozi kwezemvelo ezigxotsheni, ezikhiqizwa kakhulu wukuguquka kwesimo sezulu kanye nokwenyuka kwamazinga okushisa aphakathi komhlaba, nokwandisa amandla okuphendula ezinhlekeleleni ezingenzeka. eminyakeni ezayo. Ekutadisheni kwazo zonke lezi zinto eziguqukayo ezingathinta ukusimama kwezigxobo, kufanele kubhekwe ukuthi kukhona ithrafikhi ethe xaxa yezentengiselwano emaphethelweni we-polar. Lokho kusho ukuthi, ukuhamba kwasolwandle kubangela imithelela ethile ekusimeni kwezinhlelo zezinto eziphila ezindaweni zasolwandle. Kungakho ithrafikhi yasolwandle kuyinto eguquguqukayo ebalulekile okufanele uyibheke lapho ufunda ukubikezela kwemiphumela ezigxotsheni.
Ososayensi bakugcizelele ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi sikwazi ukwazi kangcono futhi siqonde kangcono ubudlelwane nokuxhumana okukhona phakathi kwezigxobo kanye nomhlaba wonke. Lokhu kubalulekile ngoba yizingongolo ezinquma amazinga okushisa omhlaba. Uma kungengenxa yabo, futhi ngesilinganiso lapho ukugcwala kwamagesi abamba ukushisa emhlabeni kuyanda, amazinga okushisa aphakathi komhlaba abe ephakeme kakhulu.
Ngaphezu kwalokho, ososayensi banezinhlelo zokubuka ezincike ezinhlobonhlobo ezinamazinga eqhwa aphakeme kakhulu kunezinhlelo zesimo sezulu nesimo sezulu sokubikezela.
Ukuqala ngokubuka nokubikezela imiphumela yesimo sezulu emapalini, ochwepheshe balungiselela ukufaka iziteshi ezintsha ezingaxhumanisa izindlela zocwaningo. Phakathi kweziteshi ezintsha okufanele zibekwe, siyathola ukuthunyelwa kwamaboys, ukwethulwa kwamabhaluni ophenyo, ukusetshenziswa kweziphuphutheki nezindiza.
Kuzogxilwa kuzimo zeqhwa lasolwandle eNorth Sea Route nasolwandle oluseningizimu oluzungeze i-Antarctica nokuthi ulwandle luhlangana kanjani nomoya. Ngalokhu, kungenzeka ukubuka ukuhlehla kweqhwa nokuthi kuthinta kanjani zonke ezinye izimo zezemvelo ezakha imvelo, ezifana ne-El Niño phenomenon, ethinta amazinga okushisa emhlabeni jikelele.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » I-WMO inyusa ukubonwa emapalini ngenxa yokuguquka kwesimo sezulu